Golaha Shacabka oo uu wali u qabsoomi la’ yahay Kulanka 7-aad ee Kalfadhiga 5-aad – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo uu wali u qabsoomi la’ yahay Kulanka 7-aad ee Kalfadhiga 5-aad
April 22, 2019 Kalfadhi
Markii lixaad ayuu Golaha Shacabku ka baaqanayaa kulan ay ahayd inuu yeesho Kalfadhiga 5-aad ee golaha. Kulanka maanta dhici lahaa, oo ah kii todobaad, ayaa horay u soo baaqday Sabtidii. Waxaa sidoo kale jirta in ugu yaraan hal kulan oo kale uu ka fashilmay golaha, kaas oo uu Kooramkiisu buuxsamay, laaakiin markii la furay ku dhamaaday buuq iyo ismari-waa’, iyadoon qodob iyo ajande toona laga doodin.
Caadiyan, marka uu kulan jiro waxaa farriin teleefannadooda loogu diraa Xildhibaannada Golaha Shacabka, taas oo loogu sheegayo inuu jiro kulan iyo ajandaha kulankaas, waana sababta, maadaama aysan sidaas dhicin shalay ilaa xalay, uusan u jirin maanta Kulankii Golaha Shacabka ee dhici jiray maalmaha Sabtida, Isniinta iyo Arbacada, sida ay xildhibaanno ka tirsan golaha u sheegeen Kalfadhi.
Inuu kulan ka baaqdo Golaha Shacabka, iyada oo aan la ogeen sababta, waxay xildhibaannada arrintaas kala hadla Kalfadhi sheegaan iney ka xun yihiin, iyagoo ku eedeynaya Guddoonka iyo Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabka. Waxay muujiyaan iney ku qanacsan yihiin inuusan kulanna ka baaqan golaha. Laakiin, Guddoonka Golaha Shacabku inta badan sooma hadal qaado baaqashada kulamada golaha, haddii uusan jirin khilaaf banaanka yaala oo sababay baaqashadaas.
Maaha Kalfadhigaan oo kaliya ee sidoo kale xitaa Kalfadhiyadii hore, Golaha Shacabku waxa uu baajiyey kulamo fara badan. Tusaale, Kalfadhigii 4-aad waxaa ka baaqday 16 kulan, oo uu shaqo muhiim ah ugu qaban lahaa qaranka. Inta badan waxaa baaqashada kulamadaas sabab u ahaa khilaaf xoogan oo hareeyey golayaasha dowladda.
Golaha Shacabka iyo Baarlamaanka Puntland oo ay kulamo uga bilowdeen Muqdisho
Guddiyada Joogtada ee Golaha Shacabka iyo Baarlamaanka Puntland oo isweydaaranaya aqoontooda dowladnimada